comprehension Reading ဘာမှကဲ့သို့ဖြစ်၏ မှာအကောင်းရဖို့, သင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျော်၏အဆုံး - ကံကောင်းတာက, သင်သည်ဤစာဖတ်ခြင်းနားလညျမှုသင်ထောက်ကူစာရွက်2နှင့်အတူ, ဒီမှာ, ထိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ ပို. ပင်အလေ့အကျင့်လိုလျှင် ပို. ထုတ်စစ်ဆေး ဒီနေရာမှာ PDF များနှင့်အတူစာဖတ်သင်ထောက်ကူ။
လမ်းညွန်: အောက်ကကျမ်းပိုဒ်က၎င်း၏အကြောင်းအရာပေါ်အခြေခံပြီးမေးခွန်းများကိုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်လျက်ရှိ၏ ကျမ်းပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသို့မဟုတ်ဆိုလိုဘာ၏အခြေခံပေါ်မှာမေးခွန်းများကိုဖြေပါ။
ဒါဝိဒ်သည် Kessler အားဖြင့်ကျော်၏အဆုံးမှ။ ဒါဝိဒ်သည် Kessler နေဖြင့် 2009 ©မူပိုင်။
သုတေသန၏အနှစ်သကြား, ဆီဥ, ဆားကဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲဘယ်လိုငါ့ကိုပညာတတ်ခဲ့သည်။ ငါ hyperpalatable အစားအစာများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အာရုံခံဆွတို့တွင်လင့်များအကြောင်းတွေကိုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အကြားမျဉ်းပြိုင်အချို့ကိုသိနားလည်ကြ၏။ ငါအစားအစာ၏အတွေးကသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ဆုံးရှုံးစေနိုင်ကြောင်းကိုမည်သို့ပင်နားလည်ရန်ဂလော်ဒီယာနဲ့မာရီယာနဲ့တူလုံလောက်တဲ့လူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးင်။
သို့သော်လည်းငါသည်အပြည့်အဝငါတွန်းလှန်နှင့် whoosh အကြောင်းကိုရာ၌ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း, Monster Thickburger နှင့်မုန့်ဖုတ်အဘို့ပြင်ဆင်သောမခံခဲ့ရ! အလိုလိုကျလှနျးခွငျးနှင့်ခရမ်းရောင်နွားတွေအကြောင်းကို Cheetos Flamin '' ဟော့။ သေချာပေါက်အခြေခံသိပ္ပံနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲ, အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းရောင်းချသောအရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ငါနှောင်းပိုင်းတွင်-ညဥ့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုစောင့်ဆိုင်းချီကာဂိုရဲ့အိုဟဲလေဆိပ်ထဲမှာငရုတ်သီးကိုရဲ့ကင် & Bar ကိုထိုင်နေသည်ကိုခံခဲ့ရသည်။ အနီးအနားရှိစားပွဲ၌၎င်းတို့၏အစောပိုင်းလေးဆယ်အတွက်စုံတွဲတစ်တွဲတစ်ဦးမုန့်ညက်သို့နက်ရှိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ထိုမိန်းမသည်သူမ၏ငါးပေလေးလက်မဘောင်ပေါ်နှင့် ပတ်သက်. 180 ပေါင်နှင့်အတူ, အဝလွန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမအမိန့်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါအနောက်တောင်ပိုင်း Eggrolls တစ်ဦး starter သင်တန်းအဖြစ်စာရင်းသွင်းခဲ့ကြပေမယ့်သူမများ၏ရှေ့မှောက်၌ကြီးမားသောလင်ပန်းအစားအသောက်နှင့်အတူဆည်းဖူးခဲ့သညျ။ အဆိုပါပန်းကန် "တဲ့ crispy မုန့်ညက် tortilla အတွင်းအပြင်ပတ်ရစ်သောက်သည်ကြက်သား, အနက်ရောင်ပဲ, ပြောင်း, jalapeñoဂျက်ဒိန်ခဲ, အနီရောင်ငရုတ်ကောင်းနှင့်ဟင်းနုနွယ်ရွက်" အဖြစ် menu ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်ကြောင့်တစ်ဦး creamy ထောပတ်သီး-မွေးမြူရေးခြံနှစ်ငံပြာရည်နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အမည်ကိုနေသော်လည်း, ပန်းကန်, ပိုကာကြက်ဥလိပ်ထက် Burrito တူသောတစ်ခုသာ-In-အမေရိကတိုက် Fusion ကိုချဉ်းကပ်ကြည့်လိုက်သည်။
ထိုမိနျးမသန်စွမ်းခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းနှင့်အတူသူမ၏အစားအစာတိုက်ခိုက်ခဲ့သကဲ့သို့ငါကြည့်။ , သူမသည်တဦးတည်းလက်၌ကြက်ဥလိပ်ကျင်းပငံပြာရည်ထဲသို့ dunked နှင့်ထို့ထက် ပို. ငံပြာရည်တွေထက်တောင်မှသူမ၏နဲ့အခြားလက်၌လမ်းဆုံလမ်းခွကိုသုံးနေစဉ်သူမ၏ပါးစပ်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ ရံဖန်ရံခါသူမကျော်ရောက်ရှိနေပြီနှင့်သူမ၏အဖော်ရဲ့ပြင်သစ် fries အချို့ speared ။ ထိုမိန်းမစကားပြောဆိုမှုသို့မဟုတ်ကြွင်းသောအရာများအတွက်ပမာဏမှာခေတ္တနားနှင့်အတူပန်းကန်န်းကျင်သူမ၏လမ်းအလုပ်လုပ်, မှန်မှန်စားရကြ၏။ သူမနောက်ဆုံးတော့ဆိုင်းငံ့မှုတဲ့အခါမှာသာအနည်းငယ်ဆလတ် left ခဲ့သည်။
သူမတစ်စုံတစ်ဦးကသူမကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်ဟုလူသိများခဲ့သောကျွန်မသူမကကွဲပြားခြားနားစွာစားကြလိမ့်မယ်သေချာပါတယ်။ သူမကပဲသူမဖြစ်ကောင်းသိသိသာသာသူမ၏စားသုံးမှုလျှော့တွက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်, စားပြီးမှအဘယ်အရာကိုဖော်ပြရန်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုမိန်းမဖြစ်ကောင်းသူမ၏မုန့်ညက်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများတကယ်ခဲ့ကြသည်ဘယ်အရာကိုသင်ယူဖို့အံ့အားသင့်ခဲ့ကြပေသည်။
ထိုမိန်းမသည်မည်သို့မည်ပုံငါ၏အစက်မှုလုပ်ငန်းသကြားကိုခေါ်ခဲ့တဲ့အရင်းအမြစ်, အဆီနှင့်ဆားပုသံလိုက်အိမ်မြှောင်၏သုံးမှတ်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြလိမ့်မယ်, သူမ၏ entree ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ tortilla နက်ရှိုင်း-ကြော် 40 ရာခိုင်နှုန်းကနေ5ရာခိုင်နှုန်းအထိယင်း၏ရေအကြောင်းအရာကဆင်းမောင်းများနှင့်ကောင်ဆီဥနှင့်ကြွင်းသောအရာတွေကိုအစားထိုးသွားပါတယ်။ "ဒီ tortilla တကယ်အဆီတွေအများကြီးကိုစုပ်ယူမယ့်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ "ကြက်ဥလိပ်ကြည့်ဖို့ထင်နေသည်နှင့်တူဒါဟာအပြင်ဘက်အပေါ် crispy နဲ့အညိုရောင်တည်းဟူသောကြည့်ပါတယ်။ "
အစားအစာအတိုင်ပင်ခံသူပြုသကဲ့သို့တစ်ဦးအပြေးဝေဖန်သုံးသပ်ချက်တက်စောင့်ရှောက်ခြင်း, တံဆိပ်ပေါ်ရှိအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများမှတဆင့်ဖတ်ပါ။ "။ အဖြူအသားကြက်သား, စာအုပ်ချုပ်သမားကဆက်ပြောသည်, မီးခိုးအရသာ smoky အရသာနဲ့တူပြည်သူ့ချက်ပြုတ် - ကသူတို့ကိုအတွက် caveman ပါပဲ။ "
"အစိမ်းရောင်ပစ္စည်းပစ္စယလည်းရှိတယ်" ဟုသူကထိုဟင်းနုနွယ်ရွက်သူကဆိုပါတယ်။ "ဒါကကျနော်ကျန်းမာတစ်ခုခုစားခြင်းပါပဲကဲ့သို့ငါ့ကိုခံစားရစေသည်။ "
"ဖျက်စီး Monterey ဂျက်ဒိန်ခဲ .... ဒိန်ခဲ၏နှုန်း-လူတစ်စားသုံးမှုအတွက်တိုးဇယားကိုချွတ်သည်။ "
ပူပြင်းငရုတ်ကောင်း, သူကပြောသည်, "အနည်းငယ်အမွှေးအကြိုင်ကိုထည့်သွင်းပေမယ့်အခြားအရာအားလုံးပယ်သတ်ပစ်နိုင်ဖို့သိပ်မဟုတ်ပါဘူး။ " သူကကြက်သားကိုမျိုထိုကယ်လိုရီလွယ်ကူစေသည်သောကဆက်ပြောသည် Binder အတူအများကြီးဘောဇဉ်မုန့်နှင့်တူကုန်တယ်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြောင်းယုံကြည်သည်။ autolyzed တဆေးကိုထုတ်ယူ, ဆိုဒီယမ်ဖော့စဖိတ်နှင့်ပဲပိစပ်ပရိုတိန်းအာရုံအပါအဝင်အစိုဓာတ်ကိုကိုင်ထားကြောင်းပါဝင်ပစ္စည်းများ, နောက်ထပ်အစာအာဟာရကိုပျော့ပြောင်း။ ငါဆားတံဆိပ်ပေါ်တွင်ရှစ်ကြိမ်ထင်ရှားဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်အဲဒီမှာပြောင်းဖူး-ရည်စိုင်အခဲ, ရည်, ပျားရည်, အညိုရောင်သကြားနှင့်သကြား၏ပုံစံအတွက်, ငါးကြိမ်ခဲ့ကြသည်ကြောင်းကိုသတိပြုမိသည်။
"လုံးဝဟုတ်ပါတယ်။ ဒီအားလုံးသင်သည်အစာရှောင်ခြင်းကြောင့်ဆင်း Wolf နိုငျကွောငျးထိုကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများ၌ပြီးပါပြီ ... အလွန်ရှာဖွေနေဆွဲဆောင်ခြင်း, အစားအသောက်အတွက်အလွန်မြင့်မားသောပျော်မွေ့ခြင်း, အလွန်မြင့်မားကယ်လိုရီသိပ်သည်းဆ .... တက်ကုန်တယ်နှင့် ultrapalatable ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ စည်းကမ်းများထွက်အားလုံး ကြောင်းပစ္စည်းပစ္စယသငျသညျဝါးဖို့ရှိသည်။ "
ဝါးရန်လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေးအသုံးပြုပုံခေတ်မီအစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းစနစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာစားရန်ခွင့်ပြုသည်။ "သင်သည်ဤအမှုအရာအစာစားနေရတဲ့အခါသင်ကသိကြမီ, သငျသညျ, 900 ကယ်လိုရီ 500, 600, 800 ခဲ့ပါတယ်" ဟုအဆိုပါအတိုင်ပင်ခံကဆိုသည်။ "လုံးကောက်သင်သိမီ။ " သန့်စင်ပြီးအစားအစာကိုရိုးရှင်းစွာနှုတ်၌အရည်ပျော်။
(က) ထိုမိန်းမငရုတ်သီးရဲ့ vs. သည်အခြားစားသောက်ဆိုင်မှာစားရန်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။
သူမ၏ပန်းကန်သန့်ရှင်းရေးမှာ (ဂ) အမျိုးသမီး၏ထိရောက်မှုသူမ၏ထမင်းစားခန်းအတွေ့အကြုံကထပ်ပြောသည်။
(က) ဆားနဲ့ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ပြောင်းဖူး-ရည်စိုင်အခဲများနှင့်အညိုရောင်သကြားကဲ့သို့အစားအစာထည့်သွင်းထားပါသည်။
(ခ) ကြှနျုပျတို့အလွန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်ဝါးမှမရှိကြပါဘူး။ အကြောင်းမူကား,
smoky အရသာနဲ့တူသောလူကြောင့်အ (C) ။
သကြား, အဆီနဲ့ဆားကဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (ဃ) ။
(E) နဲ့ကြှနျုပျတို့သညျဤခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလျင်မြန်စွာအစာစားရန်အသုံးပြုကြသည်။ အကြောင်းမူကား,
4. အကောင်းဆုံးဖော်ပြထားတယ်အောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များ၏ဘယ်ဟာ အဓိကစိတ်ကူး ကျမ်းပိုဒ်၏?
သငျသညျလညျးအလငျြအမွသိပ်အစာကိုစားပါလျှင် (အဖြေ), သငျသညျအလေးခြိနျရဖို့နဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
(ဂ) ငရုတ်သီးရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အမေရိကန်အတွက်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ် ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာကို ယနေ့စားသုံးသူရန်။
(ဃ) အစားအသောက်အတိုင်ပင်ခံနှင့်စာရေးဆရာများလာနှစ်ပေါင်းကျန်းမာသန်စွမ်းစဉ်မြေးဆက်အတွက်, အရှင်, သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစာစားအလေ့အထများ၏အမေရိကန်တွေသတိထားလုပ်နေပါတယ်။
(E) နဲ့သန့်စင်ဆားနှင့်အတူအစားအစာများ, သကြား, ဆီအတွင်း၌ပုန်းတပြင်လုံးကိုအစားအစာထက်လျော့နည်းအာဟာရနှင့်ပိုပြီးထိခိုက်ဖြစ်ကြသည်။
ထိပ်တန်း 10 SAT သိကောင်းစရာများ
Dong သားတော်ကိုဗုံသံ - အာရှထဲမှာရေကြောင်းကြေးခေတ် Society ၏သင်္ကေတ
Gouache Paint ၏ကြန်အင်လက္ခဏာများနှင့်ဘက်စုံ A သုံးပြုနိုင်
သငျသညျအဘယ်သူမျှမ-decompress ကန့်သတ် (NDL) အကြောင်းသိထားသင့်အဘယျသို့
စို့သင့်ချစ်စရာဆွဲပုံများ Charm ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
စိန့်ပက်ထရစ်နေ့မိသားစု / ကလေးများရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်
ဂျွန်ဆင် & Wales တက္ကသိုလ်-Denver GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အားလုံးသည်ဂျပန်အမှုန်များဝနှင့် Ga အကြောင်း
Varinia Spartacus ၏ဇနီးခဲ့သလား
အားလုံး Samhain အကြောင်း
အဆိုပါ 10 Strangest ဒိုင်နိုဆောအမည်များ
အဆိုပါမစုံလငျ Subjunctive အသုံးပြုခြင်း
မီးလောင်တိုက်သွင်းသုတေသနများအတွက် 10 အွန်လိုင်းသတင်းရပ်ကွက်များ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိက: Marketing ကိုအာရုံစူးစိုက်မှု
Cal Poly GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ဂျာမန်ကြိယာ: ANTWORTEN အတိတ်နဲ့ပစ္စုပ္ပန်
WPI, Worcester Polytechnic Institute မှ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Mabon Balance တှေးတောဆငျခွ